पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक चस्माले नहेरौं – Karnalisandesh
प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७६, आईतवार ०९:१३ January 11, 2021
उनको मृत्यु ५२ वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा भएको थियो। उनको योग्दानको बारेमा केही मानिसहरु एकमत छैनन् भने उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। कोही बाघको आक्रमणमा परेर मरे भन्छन्। कोहीले शरिरमा फोका निस्केर मरेका हुन् भन्छन्। नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ आश्विन १५ गते नुवाकोट विजय गरेर उपत्यका प्रवेश गरेका थिए। उपत्यका रहेका मल्ल राजाहरूद्वारा शासित तीनवटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन सफल भए।
पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने कुरा प्रमुख होईन। बरु उनको योगदानमाथि ठूलो अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। विसं १८७१ र १८७२ मा हामीले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा तीन खण्डमा एक खण्ड मुलुक गुमाउनु पर्यो। तर, त्यसभन्दा धेरै अघि पृथ्वीनारायण शाह कसरी सफल भए ? त्यो युद्ध कौशलको बारेमा एक मिनेट सोच्ने र अध्ययन गर्ने फुर्सद कसैसँग छैन्। तीन सय वर्ष अघि जन्मेका पृथ्बी नारायण शाहमा जुन राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामरिक र सामाजिक चेत र ज्ञान थियो, त्यसपछि जन्मेका शासकमा थिएन र छैन। उनकाे समाज नीति, अर्थ नीति, राजनीति, जातनीति, धर्मनीति, वर्ण नीति, व्यवसायदेखि सैनिक र सामरिक कूटनीति, विदेश नीति, व्यापार वाणिज्यदेखि र राजकाजका तिकडम शैलीबारे किन अध्ययन भएन? किन कि हामीसँग गालि गर्ने समय छ। तर, अध्ययन गर्ने र उनका बारेमा स्वविचार बनाउने फुर्सद छैन।
त्यसो भन्दैमा उनको स्तुतिगान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सत्य तथ्यको खोजी गरेर आगामी दिनलाई समेत शिक्षा दिनेगरी उनका बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ भनेको हो। विसं १८२४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले किन्लकको नेतृत्वमा पठाएको फौजलाई सिन्धुलीगढीमा कसरी हराए र विसं १८१९ मा मिर कासिमको फौजलाई हराउन कसरी सफल भए भन्नेबारे अध्ययन हुनै सकेको छैन। उनले ती दुवै फौजलाई हराउन नसकेको भए नेपाल अहिलेको अवस्थामा हुने थिएन्। ती युद्ध जित्न उनी कुन कारणले सफल भए भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हो।
नोट:-यो सामग्री २०७५ साल पुस २७ गते रिपोर्टनेपाल डटकममा प्रकाशित छ। यसलाई पुनः प्रकाशित गरेका हौं। – कर्णाली सन्देश परिवार